बालसाहित्य लेखक अनन्त वाग्लेसँग ३ प्रश्न | Ketaketi Online
Home » बालसाहित्य लेखक अनन्त वाग्लेसँग ३ प्रश्न
posted by ketaketionline on Fri, 12/15/2017 - 12:34
साहित्यकार अनन्त वाग्लेको जन्म वि.सं. २०३० फागुन ८ गते काभ्रेको बाँसडोलमा भएको हो । उहाँको पहिलो रचना वि.सं. २०४५ सालमा जनमत मासिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । उहाँको पहिलो प्रकाशित कृति आप्पाको झण्डा (बालकथा संग्रह, २०५८) हो । उहाँका हालसम्म ४१ वटा पुस्तक प्रकाशित भएका छन् । लेखक, पत्रकार, सम्पादक र पठन संस्कृति अभियन्ताका रूपमासमेत सक्रिय वाग्ले बालसाहित्य लेखनमा लामो समयदेखि समर्पित लेखक हुनुहुन्छ । उहाँसँग केटाकेटी अनलाइन पत्रिकाको यस पटकको ३ प्रश्नमा कुराकानी गरिएको छ ।
प्रश्न १. बालबालिकाले किन बालसाहित्य पढ्नुपर्छ ? बालसाहित्य पढ्दाका फाइदाहरुबारे केही कुरा भनिदिनुस् न !
जसरी हाम्रो शारीरिक विकासका लागि भिटामिन, प्रोटिनर्,ेहाइड्रेट, चिल्लो, खनिज पदार्थ आदि सबै तत्व पाइने सन्तुलित खानेकुराको खाँचो पर्छ, त्यसरी नै सन्तुलित र समुन्नत मानसिक विकासका लागि बालबालिकाले असल साहित्यका पुस्तक पढ्नु जरुरी हुन्छ । यसले यो अथाह जीवन जगतबारे हामीलाई नयाँ ज्ञान र सूचना मिल्छ । पढाइले आनन्द र मनोरञ्जन पनि प्राप्त हुन्छ । किताब साच्चै मानिसको निस्वार्थ र असल साथी हो । यो यस्तो विश्वासपात्र हुन्छ, जसले कहिल्यै तपाईंको गोपनियता भङ्ग गर्दैन । कहिल्यै ब्ल्याक मेल गर्दैन । कुनै माग या आसा अपेछा पनि गर्दैन । हामी जस्तासुकै दूरदराजमा पुगौँ, भूगोल, मानिस र जीवनशैली अपरिचित हुन् । किताबले सहजै समय बिताउन सघाउँछ । सम्बन्धित विषयकै किताब भए त त्यो नयाँ परिवेशमा घुलमिल हुन पनि सिकाउँछ । किताब हाम्रो यात्राको अभिन्न साथी हो, जसले हामीलाई कहिल्यै एक्लो हुन दिँदैनँ । यो एउटा अनमोल गाडधन पनि हो, जसभित्र हामीलाई मनपर्ने अकल्पनीय खजानाहरू हुन्छन् ।
२. तपाईं बालसाहित्य लेख्दा कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ ? तपाईंको विचारमा केकस्ता गुण भएको बालसाहित्य असल र उत्कृष्ट बालसाहित्य हो ?
बालबालिकाको मनोविज्ञान, उनीहरूले भोगीआएको जीवन जगत्सँग साछात्कार गर्ने मनोरञ्जन र आनन्दकासाथ ज्ञान र सूचना दिने साहित्य असल बालसाहित्य हो । म यस्तै कुरालाई हेक्का राख्दै बालसाहित्य लेख्ने गर्छु । बालबालिकाले त्यो कथाभित्रै आफूलाई भेटुन्, आफ्नो परिवेश र आफ्ना पात्र पाउन्, त्यस्तो साहित्य नै असल बालसाहित्य हो जस्तो लाग्छ ।
३. तपाईं परिचित लेखक हुनुहुन्छ । पटकपटक पुरस्कृत पनि हुनुभएको छ । अहिले के लेख्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंले तयार गर्दै गर्नु भएको किताबका बारेमा वा तपाईंको पछिल्लो प्रकाशित किताबका बारेमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न !
केही नवीन विषयहरूमा बाल आख्यान लेख्ने सोच बनाइरहेको छु । काम सकिएपछि भन्न मजा आउछ । मेरो पछिल्लो सन्तोषजनक पुस्तक भनेको यार्चा हो । यसलाई धेरै बाल पाठकहरूले सर्जकहरूले मनपराउनु भयो । धेरै विद्यालयमा यार्चा अन्तरक्रियामा सामेल हुने अवसर पनि पाएँ । यसबाट बालबालिका र किशोरका लागि कस्ता किताबको नेपालमा खाँचो रहेछ भन्ने बोध पनि भएको छ । यसका लागि अध्ययन, खोजबिन र अनुसन्धानका काममा पनि लागिरहेको छु ।